मानिसहरू अक्सर प्रश्न पावलले को जहाँ नाम दिन अनुरोध? तर लगभग सबै थप वा कम धार्मिक मान्छे चिन्ने गर्मी मा पत्रुस र पावलको दिन भनेर। को अर्थोडक्स चर्च नयाँ पात्रोमा आफ्नो जुन 29 celebrates। नाम दिन पावलले सधैं एउटै नाममा बप्तिस्मा व्यक्ति आदर गर्नुपर्छ। यो दिन उहाँले, चर्च आउन आफ्नो सेन्ट प्रार्थना छ र यसलाई सहभागिता लिन मनमोहक छ।
324 मा सम्राट् Constantine chet प्रेरितहरू मा रोम र Constantinople पहिलो चर्च निर्माण आदेश दिए। एक दिन किन पावल र पत्रुस जन्मदिन पार्टी को नाम दिन मनाइन्छ? यो दिन दुई पवित्र प्रेरितहरू को martyrdom दिन रूपमा मानिन्छ। जुन 29 तिनीहरूले यो दिन आफ्नो पवित्र अवशेषहरूको स्थानान्तरण गर्न थियो मा रोममा कार्यान्वयन थिए, र 258।
चर्च पात्रोमा पावलले नाम दिन व्यर्थमा पत्रुस मा नाम दिन संग एकै समयमा पर्नु छैन। गरेको पुरातन मा एक सानो स्नान गर्ने प्रयास गरौं मसीहीधर्म इतिहास र ठूलो पुजारी को कामहरू बारेमा थप जान्न।
पावलले टार्ससका एशिया माइनर शहरमा फरिसीहरूको परिवार मा जन्म भएको थियो। मूर्तिपूजक शाऊल - - एक ब्वाँसो रूपमा मसीही मण्डली को शत्रु अघि अचानक म एक पाठो भयो, र प्रेरित पावलले भयो। क्रूर खेदो को, उहाँले एक मसीही प्रचारक भए। मुख्य पुजारीहरू देखि दमीशक बाटोमा मसीहीहरूले दण्ड र मार्न सही प्राप्त भएको उहाँले यसो भन्दै, प्रभु को आवाज सुने "शावल, MYA gonishi?"। डर संग शाऊल trembled र यो उहाँको गर्ने कुरा थियो आग्रह? आवाज ', जवाफ म येशू हुँ। " त्यो क्षण शावललाई परिवर्तन भयो। आफ्नो ओठ सबै पृथ्वीमा प्रचार गर्न गए मा उहाँले हननिया presbyter द्वारा र येशू ख्रीष्टको नामको बप्तिस्मा लिए। यहोवा वेदनामा धेरै undergo थियो कि र आफूलाई पीडित ठूलो कामहरू उसलाई निर्देशन र चेन र shipwrecks मा, जेलमा एक मिनेट अग्निपरीक्षाहरू मा छोड्नु भएन उसलाई चेतावनी दिए। प्रेरित पावलले पक्राउ र रोम beheading मा कार्यान्वयन भएको थियो।
येशू ख्रीष्ट संग बैठक गर्न पूर्व प्रेरित पत्रुसले गालीलको बेथसेदा बस्ने एक मछुवा - सिमोन, योना को छोरा भनिन्छ।
एक दिन, भाइहरूले पत्रुस र अन्द्रियासलाई मा माछा पकडने मा लगे थिए गालील समुद्र, माथि उहाँलाई गए, र येशू उहाँको पछि तिनीहरूलाई भनिन्छ।
प्रेरित पत्रुसले जीवन को इतिहास देखि म त्यो विवाह र उहाँले Kopernaume मा एक घर थियो थियो भनेर थाह छ। उहाँले मुक्तिदाता को पहिलो चेलाहरू मध्ये एक थियो। येशूले स्टोन रूपमा अनुवाद जो पत्रुस, भनिन्छ। यो रक मा प्रभु परमेश्वरले नरक को ढोकाहरू विजयी छैन उहाँको चर्च निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
राति, पछि आखिरी रातीको अन्तिम खाना, को कुखुरा अघि गाउन, पत्रुस तीन पटक आफ्नो शिक्षक परित्याग। तर उहाँको पुनरुत्थान पछि, उहाँले तिनीहरूले पश्चात्ताप को तीतो आँसु, उहाँको क्षमा माग्छु धुन। र फेरि प्रभु प्रेषितहरूको जस्तै मर्यादा मा दिनुहुनेछ।
ख्रीष्टको मण्डली अघि पत्रुसको merits धेरै ठूलो छ। पेन्तिकोसको दिनमा पत्रुसले 3,000 मानिसहरू बप्तिस्मा हुनेछ जो पछि मान्छे, आफ्नो आगोको भाषण दिए। र एक समय पछि त्यो लङ्गडा निको हुनेछ, र त्यसपछि त्यहाँ जो पछि अर्को 5,000 मानिसहरू बप्तिस्मा अर्को उज्ज्वल प्रवचन, हुनेछ।
हेरोद अग्रिपा 42 मा (हेरोद महान् को नाति) ख्रीष्टको सबै मसीहीहरूलाई सताइएको थियो पछि। एक पटक पत्रुसले जेलमा राखे, तर परमेश्वरको दूत उहाँलाई बंधन देखि आफूलाई मुक्त र गुफा बाट उम्कन मदत गर्नुभयो। पत्रुस एन्टिओकमा, मा सुसमाचारको प्रचार एशिया माइनर, ग्रीस, रोम, स्पेन, बेलायत, कार्थेज, आदि उहाँले जो साँचो विश्वास मानिसहरूलाई सिकाउँछ र यस्तो चेतावनी दिन्छ को झूटा शिक्षकहरू दुष्ट छन् दुई क्याथोलिक Epistles, लेखे।
रोम मा पत्रुसको 67 वर्ष उहाँले पीडादायी मृत्यु लिए। आफ्नै अनुरोध मा उहाँले तलमाथि क्रूसमा थियो। उहाँले आफ्नो प्रभुको रूपमा क्रूसमा मर्न अयोग्य मानिन्छ।
दिन को अनमोल स्मृति: सेन्ट पत्रुस र पावलको नाम दिन
यो दिन मा - जुन 29 - महिमित प्रेरित पत्रुस र पावल - पवित्र चर्च को सन्तहरू दुःख सम्झन्छन्।
Apostol Petr ख्रीष्टको बाह्र चेलाहरू आफ्ना विश्वासी सेवा प्रथम स्थान जित्यो र मुख्य व्यक्ति, सारा चर्च प्रतिनिधित्व को सर्वोच्च प्रेरित बन्न लागि हो। तिनीहरूले भोगिरहेका, आत्मा र घनिष्ठता त्यस्तै भइरहेको छ रूपमा एक दिन, यी दुई सन्तहरू को स्मृति revered। तिनीहरूले एक दिन मात्र एक वर्ष को फरक संग, शहीद थिए भनेर विश्वास छ।
नाम दिन पावलले पत्रुस नाम-दिन नजिकै जानुहोस्। यो छुट्टी पहिले पश्चिमी चर्च को Bishops छलफल प्रेरित पत्रुसले चेला थिए, रोम मा भएको थियो। पौराणिक कथा अनुसार, त्यो ख्रीष्टको प्रस्तुत "स्वर्गको राज्यका साँचाहरू।"
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा नौसेना संग्रहालय। पत्रुस संग्रहालय
होटल Evalena बीच होटल3* (साइप्रस, Protaras): समीक्षा
रातो कावीयार को बहु-faceted लाभ
छोराछोरीको तीव्र लेकिमिया